Varimbazaha - Wikipedia
Ny varimbazaha dia zavamaniry toy ny vary, izay volena hohanin' ny olombelona sy ny biby hatry ny vanimpotoana talohan' ny tantara, ka ny mponina any amin' ny faritra manana toetany antonony ny tena namboly azy tamin' izany. Ny varimbazaha dia zavamaniry maniry isan-taona. Mirefy 1,2 m ny haavony. Mitovy amin' ny ravim-bary ny raviny izay mipoitra voalohany, mipoitra manaraka izany ireo taho lava mitondra ny voniny ho lasa voany. Ny voniny dia ahitana lahimbony sy vavimbony ka afaka mamoaka voa tsy mila fandraisana anjaran' ny bibikely mpamindra vovobony. Ny voany tsirairay dia milanja eo anelanelan' ny 35 sy 50 mg.
2 Fambolena varimbazaha
3 Fampiasana ny varimbazaha
Isan' ny zavamaniry voalohany notazana sy novolen' ny olona ny varimbazaha. Tany Atsianana Akaiky dia nahitan' ny mpikaroka (arkeôlôga) sisam-barimbazaha izay naniry tany amin' ny taonarivo faha-7 tal. J.K. Nisy namboly varimbazaha ny ao Ejipta taloha. Talohan' ny tantara dia efa nisy koa ny namboly an' izany tany Eorôpa. Ny varimbazaha dia efa nisy namboly koa tao amin' ny tapany atsimon' i Torkestàna sy tao Cnossos any Kreta tamin' ny taonarivo faha-6 tal. J.K. Ny Espaniôla no nitondra ny fambolena varimbazaha tany Amerika (ao Meksika) fa ny Britanika kosa no nanao izany tany New-England sy tany Virginia.
Fambolena varimbazaha[hanova | hanova ny fango]
Maro karazana ny varimbazaha ka samy manana ny karazana mety aminy ny faritra tsirairay eto ambonin' ny tany, arakaraka ny toetany sy ny haambon' ny toerana ambolena azy mba hahazoana vokatra tsara. Varimbazaha volena amin' ny lohataona sy amin' ny ririnina ny any Etazonia sy Kanada ary any amin' ireo firenena tao amin' ny Firaisana Sôvietika taloha, ka afafafy ny varimbazaha any amin 'ny lohataona na amin' ny fararano mba hojinjaina amin' ny fahavaratra. Ny tanimboly avy novolena beteravy na ovy no tsara ambolena varimbazaha, toraka izany koa ny tany natao firaohan' ny biby fiompy amin' ny fotoana voafetra na novolena voamaina. Tsy atao lalina ny vadi-bainga ho an'ny tany hovolena varimbazaha, nefa raha tiana ho lalina dia tanterahina roa volana alohan' ny fotoam-pamafazana izany.
Fampiasana ny varimbazaha[hanova | hanova ny fango]
Mofo vita amin' ny varimbazaha
Anamboarana vovo-koba hanaovana mofo ny varimbazaha malemy. Ny varimbazaha mafy kosa natokana hanaovana ireo paty fanao sakafo. Azo ahandroina hatao sakafo maraina koa (sahala amin' ny vary) ny varimbazaha. Ao Eorôpa dia azo asolo ny kafe ny varimbazaha. Azo anamboarana alkôla sy labiera koa ny varimbazaha. Ny sisa tsy nampiasaina amin' ny voam-barimbazaha dia anaovana sakafom-biby. Ampiasain' ny orinasa fanamboaran-damba ny tavolo azo avy amin' ny varimbazaha.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Varimbazaha&oldid=1038882"
Voaova farany tamin'ny 13 Oktobra 2021 amin'ny 11:22 ity pejy ity.